ကုလားကာအစ္စလာမ်ဘာသာတစ်ခုဝန်ခံဖြစ်ပါသ | Apg29
ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသမီးမွတ်စလင်များဖြစ်လာသည့်အခါသူတို့ကမွတ်စ်လင် shawl မှလျင်မြန်စွာထို့နောက်ယူပါ။ သူတို့မွတ်စလင်မ်များဖြစ်ကြသည်မတိုင်မီသူတို့ကဒီမလုပ်ခဲ့ဘူး။ အဆိုပါပဝါသို့မဟုတ်ကုလားကာ, အရှင်ယခုသူတို့မွတ်စ်လင်များမှာတစ်ဝန်ခံဖြစ်လာစေရန်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာပိုင်သိရသည်။
ငါ Forserum ကနေရှစ်ကီလိုမီတာနေထိုင်ကြသည်။ Forserum အများအပြားမွတ်စလင်များနေထိုင်ကြသည်။ ငါ Forserum ငှါလာကြသောအခါငါသည်ငါ့ကားကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေလမ်းတွေပေါ်မှာသွားလာရကြ၏။ ဒါဟာဘုံလမ်းပေါ်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရနိုင်မလဲ? ငါသည်သူတို့၏အဝတ်ပေါ်မှာကြည့်ရှုပါ။ သူတို့ကမိမိတို့ခေါင်းပေါ်နှင့်ပြည့်စုံသောအဝတ်အစားအပေါ် scarves ရှိသည်။ မိမိတို့အဝတ်ကိုသူတို့မွတ်စ်လင်ဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်သက်သေခံ၏။
ငါသူတို့မွတ်စ်လင်ကြောင့်ဒီအဝတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူတွေကိုငါမထင်မမှတ်ကြည့်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကမွတ်စ်လင်သောအဝတ်တစ်ဝန်ခံ။ သူတို့ဟာသူတို့မွတ်စလင်များဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာကြီးကိုပြသပါ။
ဒါဟာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတွေ shawl သို့မဟုတ်ကုလားကာနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆံပင်များနှင့်၎င်းတို့၏ရင်ဘတ်ကိုဖုံးလွှမ်းသင့်ကြောင်းကုရ်အာန်ထဲမှာကပြောပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်လူတို့သညျသူတို့ကိုဗလက္ islam.se မွတ်စလင်က်ဘ်ဆိုက်သည်နှင့်အညီဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်သူတို့ကမွတ်စ်လင်ဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ပါ။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုမုဒိမ်းကျင့်။ သူတို့ကယောက်ျားဗလက္နှင့်မုဒိမ်းကျင့်ရန်အဘို့အကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သောသူတို့သည်ကျေးကျွန်သို့မဟုတ်မယုံကြည်သောသူတို့မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်: ထိုသူတို့ကမိမိအကြည့်ကိုလျှော့ချနှင့်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တငျ့တယျလြောကျပတျခွငျးထက်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်ပိုမြင်နိုင်စေခြင်းငှါပြသနိုင်ဖို့မဖြစ်သင့်သောယုံကြည်သူမိန်းမတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူတို့ကိုထို့ကြောင့်ရငျခှငျသို့မှသာမိမိတို့၏ကုလားကာ (Khimar) ဆွဲကြစို့ ...
ဒါဟာအဆိုပါကုလားကာဝတ်ထားများအတွက်အခြေခံဖြစ်သောကုရ်အာန်ရဲ့ 24 အခနျးတှငျ, အရေအတွက် 31 ဤကျမ်းပိုဒ်သည်။ မွတ်စ်လင်ဒီကျမ်းပိုဒ်ကိုဆွေးနွေးသည့်အခါ Khimar "ကုလားကာ" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောနာမ်ဖော်ပြထားတယ်။ မိုဟာမက် Knut Bernströmကုရ်အာန်၏အနက်ကိုအတွက်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုအောက်ခြေမှတ်ချက်၌ဤရေးရန်:
အဆိုပါနာမ် Khimar (plur ။ Khumur) သမိုင်း၌အစ္စလာမ်ဘာသာ၏ထွန်းဆံပင်ပူးတွဲများ၏အလေ့အထရှိခဲ့အာရပ်အမျိုးသမီးတွေမီနှင့်အပြီးသောကုလားကာဆိုလိုသညျ။ ထိုရေပန်းစားဖက်ရှင်တွေတစ်ဦးရှေ့décolletageဘဝပါဝင်သည်အောက်မှာကုလားကာကိုပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းတန်ဆာဆင်ဝတ်ဆင်အများဆုံးဂန္ဝေဖန်သုံးသပ်အဆိုအရထိထိရောက်ရောက်မနောက်ကျောကိုချဆွဲထားနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့အဝတ်ကြောင့်, တွေဆီကနေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဘားဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး Khimar ၏အကူအညီနှင့်အတူကဖုံးကွယ်ထားရန်အဘယ်ကြောင့်မိန်းမများကဒီမှာမေးသော်နေကြသည်။
Bernströmဖော်ပြအဖြစ်ဂန္ဝေဖန်သုံးသပ်တစ်ခုမှာ Khimar ဖုံးလွှမ်းနှင့်ဦးခေါင်းဖုံးလွှမ်းရန်အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှင်းပြအိဗ် Kathir (ဃ။ 1373) ဖြစ်ပါသည်။ ကုလားကာပူးတွဲန်းကျင်ကဆွဲထုတ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကင်းစေရန်ဆိုလိုပါသည်။ ဘာမျှသူတို့ထဲကမြင်နိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်ဒါဟာလည်ပင်းနှင့်ရင်ဘတ်ကျော်အမှုကိုပြုလိမ့်မည်။ အိဗ် Kathir လည်းအစ္စလာမ်ဘာသာမိုဟာမက်၏မယား '' A'ishah ၏ပရောဖကျဖျော:
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အစောပိုင်းပြောင်းရွှေ့သူမိန်းမတို့အပေါ်သို့ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါဘုရားသခငျသညျအခနျးငယျထင်ရှား: သူတို့ဘော်လီဆုတ်သူတို့ကိုပေါ်တွင်တင် 'သူတို့ထို့ကြောင့်ရငျခှငျကိုဖုံးလွှမ်းရန်သူတို့ရဲ့ကုလားကာကိုဆွဲကြစို့' '။
ကုလားကာနှင့်မွတ်စလင်အဝတ်အစားတွေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသူတို့အာရုံကိုဆွဲဆောင်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါကဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင်းပြောကြသည်။ အကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုဝတ်ဆင်မွတ်စလင်အမျိုးသမီးများကိုအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်နှင့်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိတိုက်ရိုက်ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သူတို့ကလူအစုအဝေးထဲကရပ်တယ်။
ဒါဟာကိုယ်နှိုက်အတွက်ဂုဏ်မဖွစျသငျ့သညျ။ တစ်နည်းအားဖြင့်အဆိုပါကူရှင်ချုပ်, သင်တန်း၏ကျမ်းပိုဒ် 24:31 ၏ connotations တဦးဖြစ်သည့်, ကိုယ်နှိုက်မှမလိုချင်တဲ့အာရုံကိုဆွဲကြဘူး။
အဆိုပါအဖော်အဘူ Umamah သူတမန်တော်မိုဟာမက်ကိုကြားပြောတယ် - ငြိမ်းချမ်းမှုသက်ရောက်ပါစေ - ဟုပြော:
ငါ့ကိုအရာခြောက်အာမခံနှင့်ငါသည်သင်တို့ကိုပရဒိသုအာမခံပါလိမ့်မယ်: သင်တစ်ဦးပြောသောအခါသူကအိပ်ကြမည်မဟုတ်; သူသူကယုံကြည်မှုအပျနှံမည်မဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုအပ်နှင်း; သူကကတိကလျှင်သူကကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ်; သင်၏မျက်စိလျှော့ချ; သင်၏လက်ကိုပြန်ကိုင်နှင့်သင့်ပုဂ္ဂလိက [ခန္ဓာကိုယ်] အစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အမြိုးသမီးမြားရဲ့စားဆင်ယင်မှန်ကန်သောဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သင့်ပုံကိုအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်သကဲ့သို့လူသားရဲ့ခါးပန်းကိုများအတွက်ပြဌာန်းချက်လည်းရှိသေး၏။ ၎င်းတို့သည်ဤနှစ်မျိုးပစ္စည်းများမိန်းမတို့အဘို့သိုထားကြသောအခါ၎င်းတို့သည်ပိုးထားသို့မဟုတ်ရွှေကိုမဆံ့မဖြစ်သင့်ကြောင်းဥပမာဆိုလိုတာက, (ဟလာလ်) ခွင့်ပြုစေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုတဦး (awrā ') သဟဇာတမရ Mannan ကိုပြသနိုင်အောင်သူတို့ကအစပါးပါးသို့မဟုတ်ထင်သာမြင်သာဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့ကကားအဝတ်ကိုတုပဖို့မပြုလုပ်သင့်ကြောင့်အဖြူအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ရန် (mustahabb) အကြံပြုသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်လည်းသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့အာရုံစိုက်မိနှင့်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောမှကျော်ကြားခြင်းနှင့်ထိုသို့ကျော်ကြားကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ထွက်ရပ်ကြောင်းအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ရန်တားမြစ်ထားသည်။
သူတို့ကကလေးတွေမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သို့ရောက်လာသောအခါ, ထိုကုလားကာဝတ်ဆင်ကြောင်းပြောပေမယ့်ကျွန်မမကြာခဏကလေးငယ်များကုလားကာဝတ်ဆင်ကြည့်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်အမြိုးသားအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာကြပြီးမွတ်စလင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရန်မသိစိတ်အမည်ခံ။
Mona Sahlin နှင့်လီနာ Hjelm-ဝေါ်လဲန် scarves
စက်တင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် 2001 3000 အမေရိကန်တွေအထိသေဆုံးခဲ့ပြီးနှင့်ပိုပြီးကြောက်မက်ဘွယ်သောစစ်ဖန်တီးသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကြောက်မက်ဘွယ်သောအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုမြင်တော်မူ၏။ မိမိတို့ခေါင်းပေါ်အပေါ် scarves အတူဆွီဒင်ဗလီထဲသို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ Mona Sahlin နှင့်လီနာ Hjelm-ဝေါ်လဲန်လုပ်ခဲ့တယ်အခါ။ ဤသည်စိတ်ဆိုးအများအပြားသင်တန်းနှင့်တစ်ဦးနားမလည်လုပ်ရပ်နဲ့တူပုံပေါ်ပေမည်။
: ဓါတ်ပုံတွေ တစ်ဦးဗလီတစ်ခုအလည်အပတ်ခရီး 11 စက်တင်ဘာပြီးနောက်မာမွတ် Aldebe, လီနာ Hjelm-ဝေါ်လဲန်နှင့် Mona Sahlin ။
သငျသညျမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘဲနောက်ထပ်ပျကွံဖ, ကသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသနိုင်ဖို့ဖြစ်ကောင်းခဲ့ပေမယ့်ယခုများအတွက် shawl ရန်ဝန်ခံပေမယ့်သူတို့ရဲ့ scarves ဘာမျှမဖြစ်သည့်ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးထဲမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ပြရသောမွတ်စ်လင်ယုံကြည်ခြင်း, တစ်ဝန်ခံဖြစ်ပါသည် မွတ်စလင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်!
သင်သည်သူတို့အစိုးရနှစ်ခု shawl တန်ဆာဆင်အဖွဲ့ဝင်များကိုမြင်သောအခါမွတ်စ်လင်စဉ်းစားဘယ်လိုထင်သလဲ သူတို့ကခရစ်ယာန်တွေခဲ့ကြသည်ထင်? ဒါမှမဟုတ်မွတ်စလင်များကသူတို့ကိုရည်ညွှန်း? သူတို့ဟာ သက်သေခံချက်ကနျ့ သူတို့မွတ်စ်လင်ခဲ့ shawls ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Mona Sahlin မွတ်စလင်ကြောင်းသက်သေခံချက်
ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သက်သေ, ဒါမှမဟုတ် Mona Sahlin အမှန်တကယ်မွတ်စလင်ကြောင်းအနည်းဆုံးအရိပ်အမြွက်လည်းမရှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသက်သေအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်နေရသောမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး Nalin Pekgul မှလာ:
"သင်သူမဖြစ်ကောင်းထက်ဒီနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်ဖို့အခြားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအာမခံသည်ထင်သောကွောငျ့ပို Tensta tick လိမ့်မည်ဟုဥပမာတစ်စုံတစ်ယောက်က Mona Sahlin, များစွာသောအခြားမွတ်စ်လင် tick ဘယ်တော့မှမညျ့သူ။ "
"ငါသူမကိုယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမ (Sahlin) စာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှအလွန်ဝမ်းသာတယ်, ငါသည် Tensta အတွက်မဆိုပမာဏကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး အခြားမည်သည့်မွတ်စ်လင် တူညီသောလမ်းထဲမှာ"
ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင်အီရန်အစိုးရက၏ခရီးစဉ်နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုအတွက်အမျိုးသမီးဝန်ကြီးတွေကုလားကာသယ်ဆောင်။ သင်တန်း၏ဤအခြားနိုင်ငံများ '' ပြည်နယ်အလည်အပတ်ခရီးအတွက်အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုအတူတူလုပ်ဖို့မဖြစ်မနေခံစားခဲ့ရမပေးထားအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဓါတ်ပုံတွေ: shawls ၏ဝန်ကြီးများ။
ဒါကြောင့်ဆွီဒင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှထူးခြားသောအရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာကိုယ်ချင်းစာသို့မဟုတ်မြှောက်ထားတဲ့စကားရပ်ထက်ပိုဘာမျှမခဲ့သလဲ ကမွတ်စ်လင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဝန်ခံခဲ့သလား
အမ်း Linde ကုလားကာသူမ၏သောမူဝါဒထုတ်ဖော်ပြသ
လက်ရှိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမ်း Linde အီရန်အလည်အပတ်ခရီး 2017 အတွင်းကုလားကာဝတ်ထား၏။
အတော်များများကဧကန်အမှန် Margot Wallströmနုတ်ထွက်မယ်လို့သတင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏, ဒါပေမယ့်ဝမ်းမြောက်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းအမ်း Linde သူမ၏eftertäddeကြောင်းပေးထားအလုံအလောက်တိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။
သူမသည်ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင်အီရန်ခရီးစဉ်၌ရှိ၏နှင့်အခြားအမျိုးသမီးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ (https://media.publika.md/en/image/201702/full/_94625808_annlindeirna_41696400.jpg) မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖုံး။ သူမကုလားကာကိုယူကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်ဒီသူမကအစ္စရေးနှင့်ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အကြားပဋိပက္ခအတွင်းဘက်မလိုက်မဟုတ်သောအရိပ်အမြွက်ပေးသည်။
သူမသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောဒီမိုကရေစီ, ဣသရေလအမျိုးတဘက်၌ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူ၏ယခင် Margot Wallströmရဲ့ခြေရာအတွက်တတ်၏။
2011 ခုနှစ်ကအောက်ပါကြေညာချက်နှင့်အတူပါလက်စတိုင်းအသင်းမှအမ်း Linde "တစ်နှစ်ပါလက်စတိုင်း" အဖြစ်ခန့်အပ်:
အမ်း Linde, သူတို့ရဲ့အလုပ်နှင့်အပျနှံမှတဆင့်ပါလက်စတိုင်းအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၌သူ၏ခရီးသွားမှတ်တမ်း, နှစ်ဖက်စလုံးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အဆက်အသွယ်များနှင့်ဆွေးနွေးချက်များ, မကြာသေးမီကအနာဂတ်ပါလက်စတိုင်း၏မြို့တော်အဖြစ်အရှေ့ဂျေရုဆလင်များ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအဖြစ်, Lucid, ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူပါလက်စတိုင်း '' အခွအေနေကအလေးထားပြောကြားခဲ့သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အရေအတွက်က 194 အဖြစ်ပါလက်စတိုင်း၏ပြည်နယ်နှင့်အသိအမှတ်ပြုမှု။ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်အမ်း Linde ရဲ့ရုန်းကန်အမြဲနိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံမူပေါ်မှာအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
ကုလားကာကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမူဝါဒ, သူမက commerce ကိုရွေ့လျားမယ့်အဘယ်အရာကိုဖော်ပြသည်။ ဒီတော့ဒီမှာသူမက 2008 ခုနှစ်တဲလ်အဗစ်အတွက်ဒီမိုကရေစီသင်တန်းအတွက် said:
"ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်အစ္စရေးသိမ်းပိုက်ပြီးဆုံးကြောင်းသည်အဘယ်အရပ်၌ဣသရေလအမျိုးနှင့်ပါလက်စတိုင်းတို့အကြားပဋိပက္ခ, ဤငြိမ်းချမ်းသောဦးတည်ချက်အတွက်တီထွင်နိုင်ပါတယ်တစ်ခုလုံးကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတံခါးသော့ကိုပါပဲ။ "
လူမှုဒီမိုကရေစီအစိုးရကြောင့်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည်မဟုတ်သော်လည်းတစ်တိုင်းပြည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနှစ်နှစ်မတိုင်မီသူမက 2008 ခုနှစ်ပြီးသားတိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဖြစ် "ပါလက်စတိုင်း" ၏ပွောသောသတိပြုပါ။
တီဟီရန်၌, အီရန်မွတ်ဆလင်ရာဇဝတ်မှုရန်အဘို့အ 2018 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အကျဉ်းထောင်အတွင်းနှစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်ခဲ့သည်ဖြစ်လာခဲ့သည် လူသိရှင်ကြားသည်သူ၏မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှား ။ နှစ်လအတွက်သူတို့ကုလားကာဝတ်ဆင်ရန်ငြင်းဆန်သောမြေပေါ်တွင်အသက် 30 အမျိုးသမီးတွေဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
အီရန်ရှိမွတ်စလင်များနှင့်မွတ်ဆလင်မဟုတ်သောအမျိုးသမီးများကိုနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကုလားကာဝတ်ထားအပေါ်ဥပဒေသွေးထွက်သံယိုအစ္စလာမ်မစ်တော်လှန်ရေး 1979th ကတည်းကအင်အားအတွက်ပါပြီ
ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါစို့: ကုလားကာကိုသင်မကယ်တင်နိုင်ပါ။ အဲဒီအစားသင်ကမွတ်စလင်သို့မဟုတ်မရှိမရှိ, သင်ညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်တိုကျခိုကျဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခငျသညျလူအပေါငျးတို့ကိုချစ်တော်မူ၏, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကျြနှာဖုံးသညျဘုရားသခငျသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်တော်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောတကယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်ရပါမည်, ထို့နောက်သင်သူသည်သင်တို့ကိုကယ်တင်မယ့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံရန်ဤလောကသို့စလှေတျတျောမူသောသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုလက်ခံသင့်ပါတယ်။
ယရှေုသညျယနေ့အသကျရှငျ - သူသည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်။ သငျသညျကိုယျတျောကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါသငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လိမ့်မည်။ ယရှေုခရတကယ်အခမဲ့လူတွေသတ်မှတ်။
ကမျြးစာကိုလည်းကုလားကာသို့မဟုတ် shawl ကိုရည်ညွှန်းသည်, သို့သော်ဤအခြေအနေတွင်ကထုံးစံမရှိဘဲဘယ်တရားမျှမကြောင်းရှင်းပါတယ်။ ယရှေုသညျသူတို့တစ်ဖန်ပြန်လည်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအတွက်ခံရမည်သွားပေမယ့်သူတို့ကအခမဲ့ကျန်ကြွင်းသောနေကြသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအခမဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
Mona Sahlin အစ္စလာမ်ဘာသာကူးပြောင်း?
lördag4juli 2020 18:13
Bed att Jesus helar våran vovve så hon får leva i flera år till det står i Bibeln att både människor och djur hjälper Herren så det får vi tro på. Psalm 36:7. Tack alla som ber.
Filosofen: Bibelns och Koranens gudar
Gabriella : Bibelns och Koranens gudar
Yvonne: Bibelns och Koranens gudar
Susse: Svenskar åtalas för brott mot Estonialagen
Tom: De sista sju åren innan Jesu återkomst